म अध्यक्षबाटपछि हड्नु भनेको आम सहकारीकर्मीको अपमान गर्नु होः उप्रेती - सहकारीखबर
म अध्यक्षबाटपछि हड्नु भनेको आम सहकारीकर्मीको अपमान गर्नु होः उप्रेती
Share : 2,032
सहकारी बैंकको अध्यक्ष पदको लागि कसरी योग्य हुनुहुन्छ ?
म सहकारी महासंघमा पनि २ कार्यकाल बसेर काम गरे । जिल्ला सहकारी संघ, काठमाडौंको पनि दुई पटक अध्यक्ष भएँ । दुई कार्यकालभन्दा पनि कुनै पनि निकायमा बस्नु हुन्न भन्ने मान्यता मेरो रहेको छ । सञ्चालक कार्यकारी बस्न नपाउने गरी ऐन आएको र कार्यान्वय गरेको हुँ । म सँग दुई वटा मात्र विकल्प थिए । एउटा अध्यक्ष हुने । र, अर्को बाहिर बसेर सहयोग गर्ने । मुलकभरका आम सहकारीकर्मीको माग अध्यक्ष बन्नु पर्छ भन्ने भयो । बैंकलाई अघि बढाउन केबी उप्रेतीकै आवश्यक छ भन्ने माग भयो । सबै क्षेत्रबाट अध्यक्ष बन्नको लागि प्रेसर भयो र मैले बाध्य भएर उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ ।
सहकारी बैंक र सहकारी अभियानका लागि अध्यक्षको उम्मेदवार भएको हुँ । १५ वर्षदेखि यही बैंकमै छु । अभियानलाई नै आवश्यकता परेको हुँदा मैले उम्मेदवारी दिन लागेको हुँ । आम सञ्चालकको चाहना पनि मै बन्नु पर्छ भन्ने हो । सहकारीकर्मीको चाहनालाई मैले आत्मसाथ गर्नै पर्छ । त्यही भएर घोषणा गरेर अघि बढेको हुँ ।
सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको सम्भावना छ ?
अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै साथीहरु २१ गते आउनु हुन्छ । जो कोही सदस्यले पनि उम्मेदवारी दिन पाउनु हुन्छ । हामी छलफल र पहलमै छौं । म अहिले चुनावमा गएको छैन । सबै निकायमा सर्वसम्मत नै भएको छु । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
चुनाव जित्ने आधारहरु के–के हुन् ?
म त चुनाव कै लागि तयार गरिरहेको छु । आम सहकारीकर्मीहरुको साथ र सहयोग मै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हुँ । म भन्दा आम सहकारीकर्मी नै लागिरहनु भएको छ । विवाद रहित ढंगले लागि रहनु भएको छ । सहकारी अभियानको लागि नै उम्मेदवारी हो । साझा ढंगले अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो रहेको छ ।
सदस्यता विस्तार पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । चार वर्ष भित्र २० हजार सदस्य बनाउने छौं । सदस्य सहकारीको समस्या के–के हुन् । ती समस्याको पहिचान गरी समाधान गर्ने छौं । वित्तीय, प्रविधि, शिप, तालिम, स्रोत साधन, सचेतना लगायतका काम हामी गर्ने छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बढाउने काम गर्ने छौं । निक्षेप बढाउने योजना बनाउने छौं । अहिले भएको कारोबारभन्दा दुई गुणा बढाउने छौं । नयाँ नयाँ प्रविधिमा हामी लाग्ने छौं ।
केबी उप्रेतीलाई नै किन भोट हाल्ने ?
दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै संस्थामा बस्न उपयुक्त छैन । दुई दुई वटा संस्थामा बस्नु पनि हुन्न । बैंकमा कुनै पनि खालको समस्या आउन दिनु पनि हुन्न । केबी उप्रेतीले नेतृत्व गरेको संस्थामा कुनै पनि समस्या आउन दिदैन । जस्तो जुकै चुनौतीलाई पनि डटेर लड्न सक्ने क्षमता म संग छ ।
सहमतीमै जाने अवस्था आएको खण्डमा तपाईं पछि हड्नु हुन्छ ?
त्यो त सम्भावना नै छैन । मेरो नेतृत्वमा सहमती हुन्छ भने ठीक छ यदी हुन सकेन भने चुनाव नै लड्ने हो । आम सहकारीकर्मीको माग अनुसार नै घोषणा गरेको हो । उनीहरु प्रति अन्याय हुन्छ । त्यसैले पछि हड्ने सम्भावना हुँदैन ।
Select Month May 2022 (31) April 2022 (82) March 2022 (49) February 2022 (50) January 2022 (38) December 2021 (45) November 2021 (44) October 2021 (60) September 2021 (67) August 2021 (65) July 2021 (55) June 2021 (27) May 2021 (33) April 2021 (52) March 2021 (65) February 2021 (50) January 2021 (60) December 2020 (83) November 2020 (51) October 2020 (73) September 2020 (66) August 2020 (47) July 2020 (59) June 2020 (46) May 2020 (61) April 2020 (134) March 2020 (63) February 2020 (68) January 2020 (69) December 2019 (55) November 2019 (47) October 2019 (27) September 2019 (35) August 2019 (35) July 2019 (16) June 2019 (22) May 2019 (17) April 2019 (43) March 2019 (7) February 2019 (8) January 2019 (42) December 2018 (29) November 2018 (12) October 2018 (2) September 2018 (20) August 2018 (12) July 2018 (11) June 2018 (25) May 2018 (18) April 2018 (5) March 2018 (35) February 2018 (18) January 2018 (16) December 2017 (30) November 2017 (14) October 2017 (16) September 2017 (18) August 2017 (19) July 2017 (7) June 2017 (10) May 2017 (9) April 2017 (24) March 2017 (18) February 2017 (7) January 2017 (42) December 2016 (64) November 2016 (30) October 2016 (22) September 2016 (35) August 2016 (38) July 2016 (36) June 2016 (72) May 2016 (27) April 2016 (49) March 2016 (49) February 2016 (47) January 2016 (70) December 2015 (46) November 2015 (26) October 2015 (23) September 2015 (46) August 2015 (46) July 2015 (52) June 2015 (85) May 2015 (74) April 2015 (95) March 2015 (61) February 2015 (77) January 2015 (62) December 2014 (85) November 2014 (101) October 2014 (67) September 2014 (132) August 2014 (148) July 2014 (126) June 2014 (63) May 2014 (77) April 2014 (76) March 2014 (50) February 2014 (41) January 2014 (73) December 2013 (101)
पोखरा रोयलको २१ वर्षे यात्राः अग्रणी र सफल सहकारीको पहिचानमा रहिरहने प्रतिवद्धता